ဂျပန်နာမည်ကြီး ..အပြာမင်းသားကြီးနဲ့ ..ကိစ္စ သင်ဇာဝင့်ကျော်ပြောပြီ – ရွှေအလင်း
ဂျပန်နာမည်ကြီး ..အပြာမင်းသားကြီးနဲ့ ..ကိစ္စ သင်ဇာဝင့်ကျော်ပြောပြီ
ဂျ ပ အပြာမင်းသားကြီး ဂျပန်ဂတုံးဆိုသူနဲ့ မြန်မာပြည်ရဲ့ နာမည်ကြီးတဲ့ မင်းသမီးတစ်လက်ဖြစ်တဲ့ သရုပ်ဆောင် သင်ဇာဝင့်ကျော် တို့အကြောင်းတစ်ချို့ကို လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာမှာ အကောင့်တစ်ခုကနေပြီး တင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
အဲ့ ဒီအကောင့်သည် Jung Hong Kim ဆိုတဲ့အကောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုအကောင့်မှ တင်ခဲ့တာကတော့..
Mitsugu Somezima With Thin Zar Wint Kyaw.
looking for companies sponsoring us. Don’t miss it… လို့ လူမှုကွန်ယက်မှာ တင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး..Mitsugu Somezima ဂျပန်ဂတုံး ဆိုသူအကောင့်မှ ရှယ်ယူပြီး “Will they be able to play together?” This isapost called😂 ဟုဆိုကာ မျှဝေထားတာကို တွေ့ရပါတယ်။
ထို ကိ စ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သရုပ်ဆောင် သင်ဇာဝင့်ကျော်မှ သူမရဲ့ ဖေ့ဘုတ်အကောင့်ကနေပြီး ” မြန်မာနိုင်ငံကတချို့သူတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ကလေးတွေပါ ” ဆိုပြီး ရေးသားတင်ပြထားတာကို တွေ့ရပါတယ်။
မင်းသမီး သင်ဇာဝင့်ကျော်ရဲ့ တင်ပြထားမှုအောက်တွင်လည်း သင်ဇာဝင့်ကျော်ရဲ့ ပရိသတ်များက မခံမရပ်နိုင် ဝေဖန်ပြောဆို နေကြာင်းကိုလည်း ထပ်မံတွေ့မြင်ရပါတယ်..။ #ApannPyay
ဂပြနျနာမညျကွီး အပွာမငျးသားကွီး ကိစ်စ သငျဇာဝငျ့ကြျောပွောပွီ
ဂပြနျအပွာမငျးသားကွီး ဂပြနျဂတုံးဆိုသူနဲ့ မွနျမာပွညျရဲ့ နာမညျကွီးတဲ့ မငျးသမီးတဈလကျဖွဈတဲ့ သရုပျဆောငျ သငျဇာဝငျ့ကြျော တို့အကွောငျးတဈခြို့ကို လူမှုကှနျယကျစာမကျြနှာမှာ အကောငျ့တဈခုကနပွေီး တငျခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
အဲ့ဒီအကောငျ့သညျ Jung Hong Kim ဆိုတဲ့အကောငျ့ဖွဈပါတယျ။ ထိုအကောငျ့မှ တငျခဲ့တာကတော့..
looking for companies sponsoring us. Don’t miss it… လို့ လူမှုကှနျယကျမှာ တငျခဲ့တာဖွဈပွီး..Mitsugu Somezima ဂပြနျဂတုံး ဆိုသူအကောငျ့မှ ရှယျယူပွီး “Will they be able to play together?” This isapost called😂 ဟုဆိုကာ မြှဝထေားတာကို တှရေ့ပါတယျ။
ထိုကိစ်စနဲ့ ပတျသကျပွီး သရုပျဆောငျ သငျဇာဝငျ့ကြျောမှ သူမရဲ့ ဖဘေု့တျအကောငျ့ကနပွေီး ” မွနျမာနိုငျငံကတခြို့သူတှရေဲ့စိတျဓာတျကလေးတှပေါ ” ဆိုပွီး ရေးသားတငျပွထားတာကို တှရေ့ပါတယျ။
မငျးသမီး သငျဇာဝငျ့ကြျောရဲ့ တငျပွထားမှုအောကျတှငျလညျး သငျဇာဝငျ့ကြျောရဲ့ ပရိသတျမြားက မခံမရပျနိုငျ ဝဖေနျပွောဆို နကွောငျးကိုလညျး ထပျမံတှမွေ့ငျရပါတယျ..။ #ApannPyay
“အွန်လိုင်းပေါ်က …..အချစ်ကိုယုံစားပြီး လိုက်လာတဲ့ (၁၄)နှစ် သမီးလေးဒုက္ခ”
သင့်ရဲ့ အစာအိမ် အောင့်လာပါက အရေးပေါ် ဆေးနည်း (ကိုယ်တွေ့ အစွမ်း ထက်လွန်းလို့ ပြန်လည် မျှဝေလိုက်သည်)
“မိန်းမဦးရေ များလွန်းတာကြောင့် ယောကျာ်း တစ်ယောက်မှာ ရည်းစား ၃ ယောက် စီ ရှိတဲ့မြို့”
ကေ​လး (၁၃) ​​ယောက်​နှင့်​ အံ့​သြဖွယ်​လျှိုဝှက်​ချက်​.. သဘာဝလွန်ဖြစ်ရပ်ဆန်းကြီးလား 😥
“ဖိုးဖိုးလွင်မိုးနဲ့ ချွတ်စွပ်တူတဲ့ သားလေးရဲ့မျက်နှာကို ပြလိုက်ပြီဖြစ်တဲ့...
အသက် ၆၉ နှစ်လို့မထင်ရအောင် နုပျိုနေတဲ့ အဓိကအကြောင်းအရင်းကို ပြောပြလိုက်တဲ့...
နာမည်​ကြီးနေတဲ့ တွေ့မရှောင်​ လက်​သစ် စိုးမင်းအောင်​ ရဲ့ လက်​စွမ်း
“အာဖရိတိုက်မှာ ထွန်းလင်းနေတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဆရာတော် တစ်ပါး ( သို့ ) ခေတ်သစ်...